Sakafo Artichoke - Ahoana no fomba fanaovana ny sakafo tsikelikely! | Nutri Diet
Ny sakafo artichoke io no iray amin'ireo lehibe indrindra malaza sy malaza Any amin'ny firenentsika. Ny drafitra fampihenana lanja ary araka ny anarany, dia miorina amin'ny ny fananana maro an'ny artichoke hahatonga ilay olona resahina ho resy andiana kilao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Ny sakafo artichoke malaza dia manana mpanelingelina maro ary mpisolo vava maro izay matetika no mitranga amin'ity karazana sakafo ity fiantsoana fahagagana. Manaraka izany dia holazaiko anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa inona no idiran'ity sakafo ity, ny sasany ny tombony sy ny loza mety hitranga ka amin'ity fomba ity ianao dia mazava tsara, raha mendrika izany na tsy manohy hoy hatrany fomba mampihena mba hanafoanana ny kilao fanampiny hafahafa amin'ny sarinao.
1 Slimming fananana artichoke
2 Inona no atao hoe sakafo artichoke?
3 Inona no azonao atao amin'ny sakafo artichoke mahasalama?
Slimming fananana artichoke
Artichaut dia sakafo izay manana andian- fananana tonga lafatra hampihena ny lanja sy mampihena lanja. Noho izany, zava-dehibe ny fampifangaroana ity vokatra ity amin'ny karazana sakafo hafa. toy ny mahavelona ihany ary amin'izany dia mahazo karazan-tsakafo iray salama sy mahay mandanjalanja tonga lafatra ho an'ny vatana. Ny lehibe mampihena fananana ny artichoke dia ireto manaraka ireto:
Tena tsara izany loharano avy amin'ny fibre ka hanampy anao izany mahatsiaro voky haingana ary arosoy amin'izay ny fihinanana kaloria betsaka. Ho fanampin'izany, ny artichoke dia tonga lafatra mifehy lalan-tsinay tsara ary ialao ny olana amin'ny fandevonan-kanina ny sakafo.
Izany dia diuretic tena tsara ka manampy ny vatana hanafoana izany poizina sy loto maro ary manakana ny fihazonana tsiranoka.
Sakafo miaraka amin'ny otrikaina be dia be ary ny calorie tena ambany dia mety izany very lanja amin'ny fomba mahasalama.
Raha fintinina, ny artichoke dia sakafo tonga lafatra ampidirina ao amin'ny sakafo amin'ny andro sy ny andro ary mahazo mihinana iray fomba mahasalama sy tsy misy tavy.
Inona no atao hoe sakafo artichoke?
Ny sakafo henjana artichoke malaza manodidina ny 3 andro ambony indrindra ary amin'ity fotoana fohy ity dia mety ho very lanja hatramin'ny 4 kilao. Aorian'io fotoana io dia tsy azo dinihina mihitsy tohizo ity karazan-tsakafo ity hatramin'ny tsy fahampian-tsakafo ilaina ao anatiny dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe sy lehibe. Ity sakafo ity dia mifototra amin'ny fihinanana artichokes mandritra sakafo atoandro sy sakafo hariva ary amin'ny fisotroana rano betsaka hahazoana manadio ny zavamiaina manontolo ny poizina sy ny loto. Mandritra ny 3 andro maharitra ity sakafo ity dia azonao atao ihany koa ny mandray karazan-tsakafo hafa toy ny vokatra vita amin'ny ronono, voankazo, legioma, vorontsiloza ary vary volontsôkôlà.
Amin'ny alàlan'ny fampaherezana fihinanana fibre avo, hihena ianao ao andro vitsy dia vitsy. Na eo aza izany, raha vitanao ny sakafo ary tsy manova ny fahazaranao ianao amin'ny fotoam-pisakafoanana dia azo atao tokoa ny mijaly ny vokan'ny fiakarana mahatsiravina amin'ireo antsoina hoe sakafo fahagagana ary sitrana kilao maro hafa an'ireo very tamin'ny sakafo artichoke malaza. Ity misy ohatra iray amin'ny mety ho menio isan'andro amin'ity karazana sakafo ity.
Amin'ny sakafo maraina afaka manana kafe kapoaka misy ronono, dite na ranom-boankazo miaraka ianao tapa-mofo misy fromazy na mofomamy voa 3 manontolo. Antsasaky ny maraina yaourt skimmed. Mandritra ny sakafo artichoke miaraka amina vary volontany ary voankazo iray. Ho an'ny tsakitsaky dia yaourt skim na kafe misy ronono. Ho an'ny sakafo hariva artichoke telo namboarina miaraka amin'ny sombin-mofo varimbazaha iray manontolo sy ampahany kely amin'ny fromazy.
Inona no azonao atao amin'ny sakafo artichoke mahasalama?
Ny sakafo artichoke dia tena mora ny manaraka toy mifototra indrindra amin'ny fihinanana sakafo be dia be mandritra ity 3 andro maharitra ny sakafo. Amin'ity fomba ity dia afaka manomboka ny andro amin'ny salama ianao ranom-boankazo izay ny singa lehibe indrindra dia Artichaut. Amin'ny sakafo atoandro dia afaka manamboatra ianao lovia iray amin'ny vary volontany ary ampio artichoke mitovy. Araka ny hitanao izao, ny lakilen'ity karazana sakafo ity dia ahitana ny fampidirana ny artichoke imbetsaka araka izay tratra amin'ny sakafo isan'andro.
Raha te hanao sakafo artichoke mahasalama izay hahavery kilao nefa tsy hampidi-doza ny fahasalamanao, tokony hampiditra sakafo mahavelona be dia be ianao toy ny voankazo, legioma ary proteinina avo lenta. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampiditra paty na legume maka roa andro isan-kerinandro. Amin'izany no ahafahanao manalava ny fihinan'ny artichoke mandritra ny andro maro ary tsy hataonao tandindomin-doza ny fahasalamanao satria efa antomotra izany sakafo mahavelona sy mifandanja. Ho hasehoko anao ny manaraka ohatra iray amin'ny menio azonao atao amin'ny artichoke ho vokatra lehibe.
Mandritra ny sakafo maraina dia azonao atao ny mandray ranom-boankazo vita amin'ny artichoke sy legioma hafa ary mofomamy voa rehetra. Amin'ny misasakalina maraina dia afaka mandray ianao sombin-voankazo voajanahary. Amin'ny sakafo atoandro dia afaka manao tratra akoho voatono miaraka aminao ianao fangaro amin'ny artichoke. Yaorta skimmed ho an'ny tsakitsaky. Ho an'ny sakafo hariva dia salady miovaova miaraka omelette artichoke.
Mazava ho azy, ny sakafo artichoke amin'ny heviny hentitra dia toa tena loza sy loza mety hitranga ho an'ny fahasalaman'ny vatana. Heverina ho fihinana hypocalorika izy io ka rehefa mandeha ny andro dia hahatsapa ianao mihamalemy ary saika tsy misy angovo. tsy ampy proteinina sy tavy tena ilaina be dia be ho an'ny vatana dia tsy voalanjalanja tanteraka. Mifanohitra amin'izay ary araka ny hitanao andalana vitsivitsy etsy ambony, azo atao tsara ny manatanteraka karazan-tsakafo artichoke mahasalama kokoa ary amin'izany dia ho azonao atao ny manary kilao kilao. Mila mandray anjara fotsiny ianao otrikaina tena ilaina amin'ny sakafo toy izany ary araho ny karazan-tsakafo voalanjalanja kokoa.
Mba hamaranana dia apetrako eto ambany ianao horonantsary manazava mba hahafantaranao amin'ny antsipiriany kokoa ny hoe inona no ao anatiny ny sakafo artichoke malaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Sakafo Artichoke
Sakafo miteraka fivontosan'ny kibo
Fahaketrahana tsy miankina amin'ny vanim-potoana - Vokatry ny fitsaboana mavomavo fotsy mangirana